जति बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला, तपाईंको जीवनमा यस्तो हुन बाट बच्नुहोस्..,! – Sapana Sanjal
July 3, 2021 270
Sapana Sanjal : जति बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला, तपाईंको जीवनमा यस्तो हुन बाट बच्नुहोस्..,! जतिबेला तपाईंको मृ- त्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक ला-श बन्न सुरु गर्छ । अरे.., ला-श लिएर आउनुहोस् । ला-श लाई उठाउनुहोस् ।
ला-श लाई सुताउनुहोस् । यस्तै शब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन् ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउन छाड्छन्, जसको लागि तपाईंले आफ्नो सम्पूर्ण जिवन बिताउनुभयो । फेरि पनि नाच्नुहोस् । ति खुशिहरु महसुस गर्नुहोस् । फोटोहरु खिच्नको लागि पा-गल जसरी पो-ज दिनुहोस् । एकदम सानो बच्चा जस्तै बन्नुहोस् । किनकि मृ -त्यु जिवनको सबैभन्दा ठूलो ला-श होइन ।
ला-श त त्यो हो , तपाईं जि-उँदो भएर पनि तपाईं भित्र जिन्दगी जिउनुको आशा हराउदै गएको छ हरेक पल हाँसी खुशी जिन्दगी बिताउनुलाई नै जिन्दगी भनिन्छ । जिन्दगी थोरै छ , हरेक पल म खुशी छु । काम मा खुशी छ, आराम गर्दा खुशी छु आज खाना मा मा-सु छैन, दाल मा पनि म खुशी छु आज गाडी छैन , हिडेर जान पनि म खुशी छु साथिहरुको साथ छैन, एक्लै पनि खुशी नै छु ।
आज कोही रि-साएको छ, उ रि-साएको छ मलाई थाहा भएर पनि म खुशी छु । जस्लाई देख्न सक्दिन, उसको आवाज सुनेर पनि खुशी छु जसलाई पाउन सक्दिन , उसको बारेमा सोचेर पनि म खुसी छु । हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ , उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुशी छु । भोलिको बारेमा थाहा छैन , पर्खाइमा पनि म खुशी छु, हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय, आज मा पनि म खुशी छु, जिन्दगी छ छोटो , हरेक पल म खुशी छु ।
Prevहिजो बिहानको बिहे आजसम्म बाटोमै छौं’, बेहुलीले भनिन्, ‘पहिरोले विवाह नै बिचल्लीको बनाइ दियो’
Nextखेतमा पानी लगाउन गएका भोजबहादुरको भेलमा डुबेर मृत्यु
यी प्रदेशमा आज भारी वर्षा हुने, आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी दिँदै महाशाखाले यस्तो भन्यो